शा’री’रिक सम्प’र्क गर्ने उत्तम समय कुन होला ? के समयले सम्पर्कमा प्रभाव पार्छ ? – Online Khabar 24
शा’री’रिक सम्प’र्क गर्ने उत्तम समय कुन होला ? के समयले सम्पर्कमा प्रभाव पार्छ ?
September 26, 2021 September 26, 2021 by admin admin
एक अध्ययनका अुनसार एक अध्ययनका अुनसारकार्यका लागि वर्षमा सबैभन्दा उत्तम समय जाडोयामको विदाको समय हो ।
त्यसैले अंग्रेजी महिना डिसेम्बरलाई स’ म्भो गका ला गि उत्तम महिना मानिन्छ । यो महिना आधा मंसिर र आधा पुष पर्दछ ।
यसर्थ, यो महिनामा जाडो निरन्तर बढिरहेको हुन्छ, विकसित राष्ट्रतिर यो महिनामा धेरै चाडपर्वहरु पर्दछन् र मानिसहरु स्वभाविकरुपमा उत्साहित र रमाइलो मुडमा हुन्छन् ।
डिसेम्बरको अन्तिमतिर प्रायः मानिसहरु भ्रमणमा निस्कछन् । बिदा र चाडबाडको बेला मिठो मसिनो खाने प्रचलन जहाँ पनि हुन्छ । जब तपाईं तागतिला वस्तुहरु खानुहुन्छ । तपाईको शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ । शरीरमा शक्ति भरिन्छ । भरपूर केक र चक्लेट खाएपछि यसले यसले स म्भो गको लागि माहोल बनाउँछ । जोडीमा घुम्ने र रमाउनको लागि खास वातावरण पैदा हुन्छ, जसले सम्भोगको लागि सजिलो बनाउँछ । साभार गरियको खबर
Prevसंसारकै सुन्दर अभिनेत्री जो शारीरिक बनोटकै कारण सबैको ध्यान खिच्छिन् !
nextपहिलो भेटमा विवाह गरे, महिनौं पछि श्रीमती पो’र्न स्टार रहेको थाहा पाएपछी ….